Famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina amin'ny alàlan'ny fampielezana Larval any Filipina sy Aostralia | Fiaretana haran-dranomasina
Aug 31, 2018 | Vaovao
Henoy ny fanadihadiana podcast vaovao miaraka amin'i Dr. Peter Harrison, Talen'ny Foibem-pikarohana momba ny fiarovana ny tontolo iainana ao amin'ny University of Southern Cross momba ny fampielezany sy ny famerenana amin'ny laoniny tany Filipina sy Aostralia. Manana fahafahana hiara-hipetraka amin'i Dr. Harrison izahay mandritra ny Sampan-draharahan'ny Fiarovana Ara-barotra Lehibe Ara-barotra ao Cairns, any Aostralia ary manontany ny fomba fampiasana azy ho an'ny famerenana amin'ny laoniny, izay nitarika ny fahombiazany tamin'ny tetikasany, ary toro-hevitra ho an'ireo mpitantana sy mpihaino izay te hianatra tetik'asa fanarenana.
Talen'ny Foibe Fikarohana momba ny tontolo iainana an-dranomasina ao amin'ny University of Southern Cross
https://www.reefresilience.org/wp-content/uploads/Final-Interview-Peter-Harrison.mp3manokatra fisie AUDIO
Reef Resilience (RR): Hi everyone! Androany, ny Reef Resilience dia manadihady ny Dr. Peter Harrison, Talen'ny Foibe Fikarohana momba ny fiarovana ny tontolo iainana ao amin'ny University of Southern Cross momba ny ezaka famerenam-bidy ao amin'ny Coran Indo-Pasifika. Peter, azonao atao ve ny mamaritra fohifohy ny tetikasa famerenana amin'ny asa momba ny haran-dranomasina izay nataonao hatramin'izao tany Filipina - ohatra ireo karazana fomba ampiasainao sy ireo mpiara-miasa izay niarahanao nanao ity tetikasa ity?
Peter Harrison (PH): Ny zavatra nataontsika hatreto dia tetik'asa fanarenana valan-javaboary valo valo, five ao Filipina ary telo amin'ny Great Reef Barrio. Tao Filipina dia niasa nandritra ireo dimy taona farany izahay, ary ny zavatra ataonay dia ny fanangonana ny vatohara mamy avy amin'ny haran-dranomasina, ny fanabeazana azy, ka noho izany dia mahazo ny taham-pahavitrihana betsaka isika, ny fivelarana be dia be, ary ny fananganana an-tapitrisa ny lavanila isan-taona. Avy eo dia mametraka mivantana ireo lavenona mivantana eo amin'ny rafi-dohan'ny vatohara isika. Noho izany, ny asa ataontsika amin'ny fampielezana ny volokano dia somary tsy mitovy amin'ny vondrona fikarohana hafa manerana izao tontolo izao fa mifantoka amin'ny fiezahana hahazo ny taham-pahombiazana ambony indrindra eo amin'ny vatohara. Ny zavatra mahaliana momba an'i Filipina dia ireo rafitra tena ratsin'ny haran-dranomasina tena izy ireo - efa ela izy ireo no nahitana rakotra marevaka - ary tamin'ny fanjonoana lakana nandritra ny am-polony taona maro, nipoaka ny Crown-of-Thorns, nipoitra, rivo-doza, natsipy tao, ny harambato dia manjavona ankehitriny ary tsy misy fandraisana andraikitra ara-boajanahary mitranga amin'ny sehatra iray izay hanampy azy hiverina amin'ny fomba mahazatra. Ny zavatra ataontsika dia ny hitazomana ny sisa tavela amin'ireo vahoaka salama, ny famokarana lava-bato an-tapitrisany, ary ny famerenana azy ireo amin'ny vatohara, ary ny vokatra tsara azontsika.
RR: Tena tsara izany. Raha ny marina, ny fanontaniako ho anao dia momba ny vokatrao. Heverinao ve fa nahomby ireo tetik'asa ireo ary inona no heverinao fa nitarika ny fahombiazany?
PH: Nahavariana ny vokatr'ilay tetikasa, araka ny nantenainay fa nomena ny fahavoazan'ireo rafitra fisamboaran-dranomasina ireo, ka manome fanantenana kely momba izay mety ho atao any amin'ny faritra hafa manerana izao tontolo izao izay ahitana rafitra faran'izay tena simba ny haran-dranomasina. nanjary fitsipika momba ny faritra tena zava-mahatalanjon'ny vatohara. Ny zavatra nataontsika hatreto dia nampiasa karazam-borona maro samihafa, ny sasany nitombo haingana Acropora ary ny vatoharan-tsakafo manjavozavo kokoa, ary eo anivon'ireo vatohara vaingam-pamokarana haingam-pandehanana dia mahazo valiny mahatalanjona isika Hahazo fitomboana izay mitranga haingana isika ka mikolokolo ny taom-pilalaovana taorian 'ny 3 taona aorian' ny fisainan 'ny larval ao amin' ny harambato, noho izany izy ireo dia efa mihoatra ny antsasa-metatra amin 'ny diam-penina - izany tokoa, tena fitomboana haingana. Tamin'ity taona farany ity ary roa taona lasa izay dia nosamborinay ny valala avy amin'ireo karazana telo izay napetraky anay ho laro ary nitombo ny haben'ny fatrany ary napetranay tao amin'ny faritra hafa amin'ny vatohara ireo lavanila ireo. Mahavariana fa mbola mitombo ny taham-pivoarana haingana kokoa amin'ny hara-kodiarana faharoa ary efa manana ny fitombo haingana indrindra eran-tany isika amin'ny fambolena ny taona Acropora eto amin'izao tontolo izao, noho izany dia manana rakitsoratra manerantany isika. Efa lasa taona sy haavony izy ireo tamin'ny taona 2. Noho izany dia nanakatona ny andiam-balala mivantana teo amin'ny vatohara izahay vao haingana tao anatin'ny 2 taona, ary na dia ireo rafitra tena malemy aza dia azo amboarina amin'ny karazana asa.
RR: Noho izany dia manana traikefa be dia be ianao eto amin'ity faritra ity ary efa nanao asa be dia be, ary manontany tena aho amin'ny tompon'andraikitra raha manana torohevitra ho an'ny olona vaovao izay manomboka amin'ity sehatra ity ianao - mpitantana na mpahay siansa na mpitsabo?
PH: Eny, misy fahafahana lehibe. Ny rafitra haran-dranomasina tsirairay dia kely tsy manam-paharoa, ny toe-javatra dia miavaka, inona no karazana loharanon-karena, inona ny fahasamihafana eo amin'ny vatohara, na mbola tsy misy rafitra telo dimampolo izay afaka manome toerana ho an'ny haran-dranomasina, raha tanteraka kendren'ny rivo-mahery / rivo-doza mahery vaika ary nopotehina, dia mety mila mieritreritra momba ny rafitra telo-dimana izay hiverina amin'ny fandalinana sombin-dahatsoratra sasany mba hampihenana ny hetsika rano hialana amin'ny famokarana ny haran-dranomasina amin'ny ho avy mba hampitombo amin'ny resaka famerenana. Mieritreritra aho fa ny hafatra fototra hafa dia fantatsika fa mety ho ny 95% amin'ireo tetikasa famerenam-bidy antsoina hoe coral dia miankina amin'ny fambolena, ary vitsy amintsika no nahita fahombiazana. Ny dingana goavana amin'ny garderie, na dia lafo kokoa aza izy ireo, izay miasa any Karaiba miaraka amin'ny tandindonin-doza Acropora Ny karazana dia ohatra tsara amin'ny fomba ahafahan'ny vondron'olona goavana, mifantoka loatra amin'ny fisainana momba izany mandritra ny taom-pivoriana maro, dia azo avy amin'ny fampitomboana ny biomass. Na izany aza dia mbola miasa kely izahay, ary iray amin'ny tombontsoa azo avy amin'ny fomba famerenana ny famerenana amin'ny laoniny dia azonao ara-toe-javatra azonao atao ny manazava izany amin'ny mizana lehibe lavitra noho ny ataonay amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny fanodikodinam-panafarana sy ny fambolena. Manana roapolo kilometatra 100 metatra isika izay niatrehantsika ny harambato Great Barrier ary vao haingana tany Filipina. Ny tanjoko izao dia ny hananganana faritra enina sy hektara 1 miaraka amin'ity dingana famerenana amin'ny laoniny ity ary antenaina fa amin'ny ho avy dia hiasa amin'ny kilometatra kilometatra izahay. Rehefa miasa any amin'ny kilometatra kilometatra izahay, dia miresaka momba ny famerenana amin'ny laoniny ny vatohara raha oharina amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina.
RR: Nahafahanao be dia be ny mieritreritra sy nanome fanazavana be dia be, noho izany dia misaotra betsaka tokoa noho ny fonenana miaraka aminay anio.
PH: Miantso anao izahay.